Inona no Energy ventilator sitrana?
Energy fanarenana rivotra (ERV) dia ny angovo dingan'ny fifanakalozana fanarenana ny angovo raha ny tokony ho hita ao amin'ny trano na toerana reraka rivotra sy ny fampiasana azy io mba hitondra (heverina ho mialohan) Narahi-ivelan'ny trano ny rivotra rivotra amin'ny toeram-ponenana sy ara-barotra HVAC rafitra. Nandritra ny vanim-potoana mafana kokoa, ny rafitra mialoha mihamangatsiaka sy dehumidifies raha humidifying sy mialoha fanafanana tao amin'ny vanim-potoana mangatsiaka kokoa. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana angovo fanarenana dia ny fahafahana hihaona ny ASHRAE rivotra & angovo fenitra, raha fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra an-trano sy ny fitaovana HVAC hampihena fahafahana tanteraka.
Ao amin'ny teny, Energy Recovery Ventilator (ERV) mamela ny rivotra madio any an-trano, raha mbola notazonina mialoha miankina fanafanana na hihena.
Inona no modely famaritana?
Note: Installation karazana
Naato karazana, L-Floor Karazana
XHBQ-D10TH dia manondro ny mihantona karazana tanteraka ERV amin'ny hafanana, TH andian-dahatsoratra, FL rivotra ow ny 1000m3 / h, 3 hafainganam-pandeha.
Ahoana no hifidy AHU?
Holtop AHU dia natao sy voafantina araka ny matihanina rindrambaiko, manome mpampiasa amin'ny antonony, ara-toekarena, sy ny famerana mari-pana vahaolana azo ampiharina. Ny endri-javatra ny Holtop AHU fifantenana rindrambaiko ihany koa ny:
Sound tetikasa sy fitantanana AHU QUERY
Airflow marina sy ny tarika fizarana fisaratsarahana
Multiple hafanana fanarenana safidy sy ny fizarana Functional tsikombakomba
Ny rivotra teboka panjakana kajy ny fizarana lehibe
Various tsy voatery faritra
l malefaka tarika tsikombakomba
L Professional sy ny tsipiriany fifantenana mitatitra output
Hanolotra AHU ve Ianao Design Service?
Mamaritra ny tetikasa mampiasa Holtop Air fikirakirana Units
Holtop AHUs dia mifototra amin'ny famolavolana Modular tanteraka, afaka mampifanaraka ny zavatra ilain'ny isan-karazany ny fametrahana karazana, ary amin'ny alalan'ny fandoavana manokana mivelatra tsara ny angovo fahombiazana. Mba manome tsipiriany ny tetikasa sy ny zavatra takiana betsaka araka izay afaka mba hahafahantsika manao soso-kevitra ho anareo raha vao araka izay azo atao.